Maalmaha Ay Dhaceyso Doorashada Aqalka Sare Ee » Axadle Wararka Maanta
Maalmaha ay dhaceyso doorashada Aqalka Sare ee
Muqdisho (Axadle) – Guddiga maamulka doorashada kuraasta labada Aqal ee Gobaladda Waqooyi ayaa soo saaray jadwalka doorashada xubnaha Aqalka Sare ee gobollada waqooyi, taas oo la guda gelayo maalinta Khamiista ah ee 23-ka bishaan, sida ku cad jadwalka.
23-ka bishaan oo ku beegan maalinta Khamiista ah ee soo socota waxaa la diiwaan gelinayaa musharaxiinta u tartameysa kuraasta Aqalka Sare ee Gobaladda Waqooyi, waxayna diiwaan gelintu socaneysaa ilaa maalinka Sabtida ah ee 25-ka bishan.
Maalinka Talaadada ah ee 28-ka bishan ayaa loo qorsheeyey inay bilaabato doorashada Aqalka Sare ee xubnaha metelaya Gobaladda Waqooyi, waxayna ku egtahay 30-ka bishaan September.
Seddax maalmood oo kala ah, 28-ka, 29-ka iyo 30-ka bishaan ayey Muqdisho ka dhaceysaa doorashada 11-ka kursi ee Gobaladda Waqooyi ku metesha golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, jadwalkana laguma cadeyn tirada kuraasta maalinkii la dooranayo.
Jadwalkaan uu soo saaray guddiga maamulaya doorashada labada Aqalka ee xildhibaanada Gobaladda Waqooyi waxuu ku soo aaday saacado kadib markii guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed ay R/Wasaare Rooble u gudbiyeen liiska musharaxiinta u tartameysa kuraasta Aqalka Sare.